Doorashadii madaxtinimo ee Koonfur Galbeed waa ay soo idlaatay: maxaa xiga? - Halbeeg News
Waxaa 19-kii bishan Diseembar qabsoomay doorashadii muddada dheer la wada sugayay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Musharaxii ay madaxtooyadu taageereysay, marar kala duwanna wasiirka ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, oo ay ugu dambeysay dowladda hadda jirta oo uu wasiir ka ahaa, isagoo sidoo kalana ka tirsanaa Golaha Shacabka, Cabdicasiis Xassan oo loo yiqaanaa Lafta-Gareen ayaa loo doortay Madaxweynaha labaad ee Koonfur Galbeed. Madaxweynaha cusub ayaa loo tixgeliyaa in uu yahay qof khibrad badan u leh shaqada dowladda; maadaama uu sanada badan soo ahaa sarkaal dowladda ka tirsan.
Habka ay doorashadu ku socotay ayaa ahaa mid aad u adag muran fara badanna dhaliyay. Guddoomiye ku xigeenkii hore ee ururka al-Shabaab Mukhtaar Roobow ayaa ahaa mid kamid ah kuwa ugu cadcad Musharixiinta u ordayay xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed ka hor intii aan la xirin loona soo gudbinin Muqdisho 13-kii bishan Diseembar. Dowladda ayaa ku eedeysay in uusan soo buuxinin shuruudihii lagula heshiiyay si uu ugu tartamo xilka madaxtinimada Koonfur waxa ayna u aqoonsatay mid caqabad ku ah amniga qaranka. Warqad ay soo saartay wasaaradda amniga ayaa u qorneyd sidatan “Ugu horeyn waa in Mukhtaar Roobow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada, si cad oo aan qarsoodi laheyn uu u cambaareeyo fikirka xagjirka ah, isla markaana taageero dowladda federaalka Soomaaliyeed, marka xigtana aanu ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo minja xaabin ka dhan ah dowlad federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah.”
Si kastaba ha ahaatee tallaabada at dowladda federaalka Soomaaliya xabsi guri uga dhigtay hogaamiyihii hore ee ka tirsanaa ururka al-Shabaab ayaa loo arkayay horumar siyaasadeed oo uu dalka ku tallaabsaday. Taas oo ah in qof walba oo falal argagaxisanimo kula kacay shacabka Soomaaliyeed lagula xisaabtami doono. Xarigga Mukhtar Roobow waxaa fududeeyay ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan Baydhabo waxaana xarigga wadaadkan uu dhaliyay rabshado iyo dibad baxyo sababay dhimashada ugu yaraan 10 qof. Daadinta dhiigga waxa ay aheyd wax aanan la aqbali Karin, waanainaaney mar danbe dhicin.
Siyaasadaha iska soo horjeeda
Shariif Xassan Sheikh Aadan oo ahaa Madaxweynihii hore ahna kii koowaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo arkayay nin isgedgeddis badan oo dood badan dhaliyay isaga oo uu khilaaf kala dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya. Intii uu xilka hayay maamulkiisu waxa uu isku dayi jiray inuu si madaxbanaan u sameysto siyaasaddiisa arrimaha dibadda, taasoo ay la wadaageen saaxiibbadiisa maamul goboleedyada kale – taasoo ah tillaabo aan marnaba waafaqsaneyn dastuurka kumeel gaarka ah. Howlaha arrimaha dibadda waxaa u si gaar ah uga masuul ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu maamulkiisii xiriirro la sameystay dowlada shisheeye taas oo dhalisay khilaaf cusub. Ugu danbeynna waa is casilay.
Intii uu xilka hayay waxa ay aheyd Madaxweynihii hore in uu waqtigiisa geliyo horumarinta gobolkiisa. Inuu horumariyo xiriirkii uu la lahaa dowladda federaalka. Waxa ay ahayd inuu wax ka qabto dib u furidda jidka isku xira maamulka (oo maritstoodu ay in muddo ah mustaxiil u muuqdeen), oo dowladnimada gaarsiiyo magaalooyinka al-Shabaab laga xoreeyay, sidoo kalena uu horumariyo hanaanka uu adeegga dowladdu ku gaaro dadweynaha. Dhammaan howlahaa kor ku xusan waxa ay ka mid yihiin waajibaadka dastuurka federaalku uu siinayo madaxda dowlad goboleedyada.
Taa beddelkeeda madaxweynihii hore, Shariif Xassan waxa ay isaga madaxdii kale ee maamul goboleedyadu tartan dhanka xukunka ah la galeen madaxda dowladda federaalka ah. Siyaasadaha iska soo horjeedana kama caawin doonaan maamul goboleedyada in ay gaaraan horumarkii loo asteeyay, si uu horumar u gaaro maamul goboleedku waa in uu xiriir adag la leeyahay dowladda federaalka ah. Maamulku waa in uu ku dhaqmaa siyaasad dastuurka ku dhisan oo uu tixgeliyaa dib u dhiska dal dagaallo sokeeye ka soo kabanaya.
Khibradda xooggan ee uu ka bartay muddadii uu siyaasadda ku jiray uun dusha kala socday hab dhaqanka aan natiijada wanaagsan leheyn ee madaxda dowlad goboleedyada, ayaa madaxweynaha cusubi u isticmaali karaa, hagaajinta waxyaabihii ka hallaabay madxweynihii isaga ka horreeyay.
Waa tilaabo faaiido u yeelan doonta shacabka, maamaa ay usoo joogeen maamul xumo iyo khilaaf maamulka kala dhexeeyay dowladda federaalka ah. Madaxweynaha cusub waxa looga fadhiyaa in uu dhiso hay’adaha dowladda, in uu la dagaalamo faqriga iyo abaaraha hor istaagay horumarka dadka; kana fogaado khilaafaad dhex mara isaga iyo madaxda dowladda federaalka ah taasoo oo dib u dhac u keeneysa horumarka maamulka. Waana in uu sidoo kale ka fogaadaa shaqo walba oo aan dastuuri aheyn taas oo keeni karta khilaaf dhex mara isaga iyo madaxda dowladda federaalka ah.
Masuuliyiin iyo siyaasiyiin fara badan oo ka soo horjeeday doorashada Lafta-Gareen ayaa haatan u hanbalyeynaya iyagoona shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqaya in ay nabadda ilaaliyaan, tani oo muujineysa sida ay dadka reer Koonfur Galbeed uga go’an tahay dib u dhiska gobolkooda iyo in ay taageeraan dowladda dhexe.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu wajahayaa caqabada fara badan oo aad u waaweyn, oo ay kamid tahay abaaro soo laalaabtay, hanaanka dowladnimada oo daciif ah, kobac dhaqaale oo aan jirin, heerka saboolimo oo aad u sareysa, amni darro (qeybo waaweyn oo gobolka kamid ah waxaa gacanta ku haya ururka Al-shabaab oo uu ku jiro jidka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo), iyo shaqa la’aan aad u baahsan oo heysata dhalinyarada. Balse si walbaba ha noqoto marwalba oo uu Maamulka Koonfur Galbeed gaashaanbuur la noqdo dowladda federaalka ah waa mar walba oo uu horumar ka faaiido sida in uu dowladda federaalka ah ka helo qeyb kamid ah qoondada miisaaniyadda iyo waxyaabo kale oo horumar iyo xalka caqabadahaasi horseedi kara.
Soomaaliya waxaa ku socda isbedel weyn oo dhanka siyaasad iyo dhaqaalaha ah. Dhinaca dhaqaalaha waxaa horumar ah soo laabashada diyaaradihii caalamiga ahaa iyo kuwii gobolka oo ka shaqa bilaabay garoonka Muqdisho iyo isdhexgal dhaqaale oo laga yaabo in ay Soomaaliya sameyneyso waddamada gobolka iyo caalamka. Dhammaan calaamadahan waxa ay muujinayaan in Soomaaliya ay u furan tahay ganacsi, waxaana looga baahan yahay maamul goboleedyadu in ay ka faa’iideystaan horumarka dhaqaale ee uu dalku ka tallaabsanayo.
Siyaasad ahaan dowladdu waxa ay dib u dhiseysaa hay’adihii dowladda iyadoo kor laga soo bilaabayo, dhanka kale soo jeedintii laga keenay xilkaqaadista Madaxweynaha waa tii laga laabtay.
Doorashada ka dhacday Koonfur Galbeed waxa ay halbeeg u tahay doorashooyinka xiga ee ka dhici doona Puntland iyo Jubaland bilaha Janaayo iyo August. Waxana la rajeynayaa in ay noqdaan doorashooyin si xor ah oo xalaal ah u dhaca kuwaa oo aan wadanin rabshado iyo burbur.
Dowladda federaalka ah maxaa la gudboon?
Marka koowaad, Dowladda federaalka iyadoo qiimeyneysa khilaafka iyo is-af-garanwaagii ka dhashay doorashadii Koonfur Galbeed waa in la adkeeyaa dib u dhiska kalsoonida shacabka Koonfur Galbeed ay ku qabaan dowladda federaalka ah. Dad badan oo kamid ah bulshada ku nool Baydhabo ayaa aaminsan in Mukhtaar Roobow xaqdarro lagu xiray, hasa ahaatee qayb badan oo daka ka mid ah ayaa ka gaaraabay sharraxaaddii dowladdu ka bixisay xarigga Roobow ee ahayd inuu halis ku ahaa amniga qaraxnka maadaama uu sida la sheegay hub iyo ciidan deegaanka soo geliyay.
Marka labaad waa in ay dowladda xiriir wanaagsan la sameysaa madaxda cusub ee maamulka waana in ay halkaasi ka bilowdaa fulinta Mashaariic horumarineed, dib u dhiska hanaanka dowladnimada, amniga, dhisidda wadooyinka iyo xarumaha gargaarka degdegga ah, horumarada sidan oo kale ah ayaa laga fulinayaa maamul goboleedyada kale, laakii waa haddii ay doortaan hoggaan si xasiloon ula jaanqaada dowladda dhexe oo ka fogaada khilaaf xakameyn kara in adeegyada federaalku ay muumullada gaaraan.
Ugu danbeyn, dowladda federaalka waa in ay taageertaa doorasho xor iyo xalaal ah, oo ka dhacda maamullada kale, waana in ay dowlad goboleedyada kala shaqeeyaan calaameynta xuduudda maamul goboleedyada sida ku xusan dastuurka. Guud ahaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxaa laga doonayaa in ay ka wada shaqeeyaan dowlad wanaagga iyo sidii shacabka loo gaarsiin lahaa adeeggii dowladda intii ay xukun isku heysan lahaayeen.